बाढीका कारण धार परिवर्तन गरेको मर्स्याङ्दीलाई पुरानै धारमा फर्काइयो
१६ साउन, मनाङ । मनाङ भएर बग्ने मर्स्याङ्दी नदीलाई पुरानै धारमा फर्काइएको छ । गत असार १ गते परेको अविरल वर्षापछिको बाढीका कारण नदीले धार परिवर्तन गरेको थियो ।
नदीले आफ्नो पुरानो धार परिवर्तन गरेपछि महिना दिनसम्म थुनिएर ड्याम बनेको र यसका कारण चामे बजार उच्च जोखिममा परेको थियो ।
जिल्लाका विभिन्न सुरक्षा निकाय र स्थानीयको महिना दिनभन्दा लामो प्रयासपछि बिहीबार मर्स्याङ्दी नदीलाई पुरानै धारमा फर्काउन सफल भएको सशस्त्र प्रहरी बल मनाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक होमनाथ पन्थीले बताए ।
उनले भने, “महिनौं दिनपछि आज मर्स्याङ्दी नदीलाई पुरानै धारमा फर्काउन सफल भएका छौँ । सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय र विभिन्न सुरक्षा निकायको निरन्तरको प्रयास पश्चात् नदीलाई पुरानै धारमा फर्कायौँ ।”
असार १ को बाढीले मनाङमा सडक, पुल, विद्यालय भवन र बस्ती बगाउने खतरा बढेसँगै सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणको प्रयास गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बलका नायब उपरीक्षक पन्थीले बताएका छन् ।
यही असोज १५ गतेबाट प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनमा आउँदै
ट्रिपरले ठक्कर दिँदा प्राइम टिभीका दृश्य-सम्पादक अनिल गौतमको निधन
यामाहाको ‘फ्रिडम इनिसिएटेड नयाँ वर्ष २०७८’ योजना, भाग्यशाली विजेतालाई यस्तो छ बम्पर उपहार !
बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट दुई युवकको मृत्यु
होसियार ! उपत्यकामा वायु प्रदूषण हवात्तै बढ्यो, घरबाहिर ननिस्किन विभागको अनुरोध
अमेरिकाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराएर फर्किएका रजनीकान्तको स्वागतमा एयरपोर्ट भीड